Otu esi ewupụta ezigbo ika | Martech Zone
Ndị isi ahịa ahịa nke ụwa na-egosipụta ya n'ụzọ dị iche iche, mana ha niile kwenyere na ahịa dị ugbu a tozuru oke na echiche, ikpe, na akụkọ ịga nke ọma dabere na ụdị mmadụ. Isi okwu dị n'ime ahịa a na-eto eto bụ ezigbo ahịa na ika mmadus.
Ọgbọ dị iche iche: Otu olu
Philip Kotler, otu n'ime Grand Old Men of marketing, dubs na onu 3.0 Marketing. N’akwụkwọ ya nke nwere otu aha ahụ, ọ na-ezo aka n’ebe ndị na-ahụ maka ire ahịa na ndị na-ekwurịta okwu bụ́ ndị nwere “ikike ịghọta nchegbu na ọchịchọ mmadụ.”
Olu nke ndị na-eto eto bụ guru nzikọrịta ozi Seth Chinekein, onye na-ekwu na "Anyị achọghịzi ka e jiri ozi gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ mebie anyị. Anyị chọrọ inwe mmetụta njikọ na ya. Ịbụ mmadụ bụ naanị ụzọ isi merie." N'ime ihe ngosi okirikiri ọla edo ya ama ama na TED Talks, Simon Sinek na-akọwa na ya mere nke ụlọ ọrụ tọrọ ntọala ga-adị ike nke ukwuu, na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ire ụdị ngwaahịa ọ bụla site na ikpo okwu a.
N'agbanyeghị ọgbọ dị iche iche na mmalite mmalite, ndị ọkachamara ahịa ahịa a nwere nkà na-ekwu maka otu ihe: Ụdị mmadụ.
Ọ dịghị ihe ọhụrụ dị n'ihe ize ndụ. Ọ bụghị ihe ọhụrụ maka ụlọ ọrụ ịchọ eziokwu - ọ bụghịkwa ihe ọhụrụ maka ụlọ ọrụ itinye uche n'ige ndị nnata ha ntị na ikweta mmejọ ha kama itinye oge ha niile na-agbalị ime ka ndị ahịa ha kwenye na ịrata ha.
Enwere ike ịhụ mgbanwe mgbanwe na nyocha dịka The Lippincott-LinkedIn Brand Ike Akara, nke na-egosi na ụzọ onwe onye, ​​​​adịghị ike, na nke mmadụ na-esi na nzikọrịta ozi na akara aha na-anabata nke ọma site n'aka ndị ahịa. Nnyocha egosiwo na ndị na-azụ ahịa agafeela amụma ndị ọkachamara setịpụrụ, na-eme ka ahịa mmadụ bụrụ ụzọ a na-apụghị ịgbagha agbagha.
Ajụjụ a bụ: ika gị nwere ike ịdịgide?
Ezi ire ahịa apụtabeghị n'ikuku siri ike. Ntugharị na usoro dị iche iche akpaliwo ya n'ime afọ ndị gafeworonụ, dị ka hyper transparency, co-cream, open-source, crowdsourcing, mmụta mmụta, mgbochi-branding, wdg.
Mana ihe abụọ ebutela mgbanwe ahịa ahịa n'otu oge:
1. Ezigbo ahịa bụ ngosipụta nke mmegharị - ọ bụghị ụdị
Ihe omume a gbadoro ụkwụ na ụlọ ọrụ, site na njiri mara na arụ ọrụ na-agbanwe agbanwe na ụdị mmadụ ha na nnabata ha, na-aghọ mmegharị ahụ dị mma karịa ụdị dị larịị.
Were Toddy Brazil nke Pepsi mkpọsa dịka ọmụmaatụ:
Na Brazil, ahịa maka ndị toddy ihe ọṅụṅụ chọkọletị amalitela ịkasị ebe ahịa wee malite ịchọ ihe ọhụrụ. Pepsi enweelarị mascot, nke na-enweghị mmasị na ọkwa elu, ọkachasị ndị na-azụ ahịa na-eto eto. Ha weere ya na ọ mara mma ma na-atọ ụtọ, nke bụ otú anyị si aghọta mascots ika.
Pepsi gara n'ụkwụ wee mee mascot ha ka ọ bụrụ ọnụ na-ekwuchitere mmegharị ahụ. Pepsi achọpụtala ngagharị siri ike na soshal midia. Otu dị iche iche nke otu na ndị mmadụ n'otu n'otu nọ na-aga n'ihu na-aga n'ihu, na-elekwasị anya na mgbasa ozi na-adịghị eme ihe. Ntugharị ahụ lekwasịrị anya na mba nke nrụrụ aka mara yana nkwa ndị mebiri emebi na nke efu.
Pepsi tụrụ aro ka ndị ọgbọ na-eto eto jiri atụmatụ mkparịta ụka n'ịntanetị mee nkwupụta sitere na mascot. mee oge ọ bụla a nụrụ nkwa efu - na mkpọsa ahụ gara nke ọma.
N'oge na-adịghị, mee n'ihi na synonymous na bee ihe ojoo. Ndị na-eto eto mejuputa atumatu mee-ozi na mkparịta ụka ha, ma n'ịntanetị ma n'ịntanetị. Na mberede, Toddy so na omume. Ahịa nke ngwaahịa spiked na Pepsi gbanwere akara ha ka ọ bụrụ mmegharị.
2. Mgbanwe site na ndị ahịa na-elekwasị anya mmadụ
Kama ilekwasị anya na ụzọ maka ime ka ndị nnata kwenye, dị ka mkpọsa, atụmatụ, spins, wdg, ịzụ ahịa ga-eji nwayọọ nwayọọ malite ilekwasị anya karị n'ịchọpụta ihe mere ndị mmadụ ji azụ ihe. N'ọdịnihu, nke a ga-abụ mmalite maka mmepụta ngwaahịa.
Nke a bụ akụkụ nke ihe kpatara ezigbo ahịa bụ maka ndị mmadụ (ọ bụghị ndị ahịa) yana mkpa anyị kacha mkpa. Mkpa ndị a gụnyere:
Ịchọta ihe ọ pụtara
Na-egosi ụdị mmadụ
Enwere ike ịhụ ihe atụ nke akụkụ nke abụọ a nke mgbanwe paradigm n'agbụ America Dominos.
Ná mmalite nke ihe na-adịghị mma, Dominos nọ na-agba ọkụ maka ịdị mma nri, afọ ojuju ndị ọrụ, na ịnụ ụtọ ndị ọrụ. Kama ịghọ ihe nchebe na ịmalite mkpọsa iji mee ka ndị ahịa kwenye na nke ọzọ, Dominos họọrọ imejuputa usoro nsogbu dị umeala n'obi na nke na-anabata. Dominos kwadoro ọtụtụ igbe pizza ha nwere koodu QR, na-arịọ ndị ahịa ka ha nyochaa koodu ahụ wee buru ya na Twitter iji kwupụta echiche ha.
Nke a bụ atụmatụ na-aga nke ọma, dịka mmadụ niile na-eche na ọ dị mkpa ka a nụ ya wee nwee mmetụta ịghọta.
Atụmatụ ahụ mere ka a nakọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke data nke ụlọ ọrụ ahụ jiri nke ọma mee ihe n'ụzọ dị iche iche:
Dị ka akụkụ nke ahịa mpụga ha, Dominos zụtara ụfọdụ oghere mgbasa ozi kachasị ọnụ na United States, gụnyere bọọdụ mgbasa ozi Times Square, ihe niile naanị iji gosi tweet ndị ahịa ndị a na ozugbo. E gosipụtara ọbụna nyocha ọjọọ, iji kwalite akara ngosi nke ịkwụwa aka ọtọ na nghọta. N'ihi ya, Dominos gosiri na ha bu n'obi ige ntị n'olu dara ụda.
Ebe E Si Nweta: Ụlọ ọrụ na-agba ọsọ
Dị ka akụkụ nke ahịa ime ha na nlekọta ndị ọrụ, Dominos guzobere ihuenyo kọmputa na mpaghara ebe a na-emepụta pizza iji nye ndị na-eme achịcha na nzaghachi ozugbo. Nke a mechiri nke ọma ọdịiche dị n'etiti ndị ọrụ na ndị ahịa.
Mgbasa ozi ahụ butere mmụba nke ndị na-eso Twitter 80,000 n'ime ihe na-erughị otu ọnwa. Nsonaazụ ndị ọzọ gụnyere mmụba na nlebara anya PR, mmụba nke afọ ojuju ndị ọrụ, nkwalite gburugburu gburugburu aha nke ika ahụ, yana mmụba nke mmadụ. Nke a bụ ezigbo ahịa na ya kacha mma!
Ahịa nke na-ekwe nkwa zuru oke
Enwere ọtụtụ ihe atụ magburu onwe ya nke ụlọ ọrụ na-emeghe anya ha maka uru nke ezigbo ahịa. Nsonaazụ bụ akụkọ ịga nke ọma nke mkpọsa pụrụ iche na-adabara ndị ahịa.
Na ụlọ ọrụ MarTech m Akụkọ Jump anyị emela ọpụrụiche n'ịkọpụta foto ngwaahịa ngwaahịa na vidiyo dị adị, yabụ na ịkwesighi iji ndị niile na-achọ cheesy dị n'ebe ahụ. Anyị na-eji AI wepụ ihe niile na-enweghị isi, anyị na-elekwasịkwa anya na isi okwu abụọ bụkwa isi nke ezigbo ahịa: mmadụ & àgwà.
Okwu ikpe ndị a bụ iji kpalie gị ime mgbanwe ka ọ bụrụ akara mmadụ na-anabata nke ọma - na mgbanwe a, nweta uru akụ na ụba n'ụzọ.
Otu ụlọ ahịa ndị America na-ere ọkụ n'ihi na-agwụkarị n'ime ngwaahịa ha kacha ewu ewu. Na nzaghachi na nkatọ a, ụlọ ọrụ ahụ malitere okwu ọhụrụ - yana ya, echiche ọhụrụ: Ọ bụrụ na ọ dị na ngwaahịa, anyị nwere ya. Nke a siri ike-isi onwe-irony nwere nti mmetụta na ma ahịa na ika aha.
N'obodo Chineke, ị nwere ike ịhụ ụdọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị China nke na-akpọsa n'okpuru isiokwu a Nri izizi. Bekee dara ogbenye. Wezụga ọchị a na mkparị onwe onye, ​​ahịrị ntụmadị na-akọwapụta otu okwu kpochapụrụ n'ime ụlọ ọrụ nri. Maka onye ahịa na-achọ izi ezi, otu n'ime ihe kacha njọ nwere ike ime bụ ịga ụlọ oriri na ọṅụṅụ Italiantali naanị ihe nkesa Danish zuru oke. Ihe anyị chọrọ bụ ịma mma na-enweghị atụ iji jiri mmasị na-ejere pizzas anyị ozi.
N'aka nke ọzọ, anyị chọrọ ka anyị nwee ike ịghọta okwu ọ bụla dị na menu ma soro ndị ọrụ na-ekwurịta okwu nke ọma. Nke a na-esi ike mgbe ụfọdụ ma ọ bụrụ na izi ezi bụ ihe kacha anyị mkpa. Agbụ nke ndị China na-akọwapụta nsogbu a kpọmkwem ma guzobe n'okwu a.
Okwu abụọ a bụ ihe atụ nke ihe ahụ Nhazi oge dub adịghị mma. Okwu a bụ nkọwapụta okwu egwu na adịghị mma. N'otu aka ahụ dị ka mkpọsa Dove's Real Beauty, ikpe abụọ a na America na-egosi na ị nwere ike inyocha mmadụ gị ma n'otu oge ahụ na-amachi nkwa gị na ndị ga-emezu n'ezie. N'ezie, agbụ ndị a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkwa na-erughị ihe ha na-enye.
Na tiori, ụdị niile nwere àgwà pụrụ iche, n'otu ụzọ ahụ mmadụ si eme. Eziokwu ka bụ na ụfọdụ mmadụ na-adọrọ mmasị karịa ndị ọzọ. Ụfọdụ na-apụta ìhè n'ụzọ ziri ezi, na-enweghị atụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, anyị nwere ike ịkọwa kpọmkwem ihe kpatara ya na n'ebe ndị ọzọ, ọ dị ka ịgha ụgha nke anyị na-apụghị iru.
N'ime ụwa nke ịre ahịa, enwere ihe atụ ole na ole pụtara ìhè nke ihe a. Miracle Whip pụtara na ya Anyị abụghị maka onye ọ bụla akụkọ; Ọṅụ mmanya na-enweghị ntụpọ bụ ndị ama ama maka ọchị na ikwu eziokwu. Ọmụmaatụ nke ụdị mmadụ a bụ ederede enwere ike ịhụ na ala nke ọtụtụ katọn mmiri mmiri ha, nke na-agụ: Kwụsị ile anya ala m.
N'ime USA, ọtụtụ mmadụ maara maka ikpe ụgbọ elu Southwest. The ụlọ ọrụ nakweere a amụma na-ekwu, na ọ dịghị nche mara ọkwa kwesịrị otu. Gaa na YouTube wee hụ ihe atụ nke onye na-eto eto na-eje ozi ụgbọ elu na-agba ọsọ site na usoro nchebe na-abanye ụgbọ elu ahụ. Rịba ama ka esi enweta usoro a site n'iti mkpurị.
Ọ bụrụ na ị lebeghị anya na ala karama smoothie anyị n'oge na-adịbeghị anya, ugbu a nwere ike ịbụ oge dị mma iji lelee anya. pic.twitter.com/tsw2Fs8WD1
- mmanya na-emeghị ihe ọjọọ (@innocent) November 20, 2013
Na-emepe emepe ma na-atụ mmadụ
Mmadụ bụ otu n'ime njirimara ole na ole nwere ike ịkwaga ndị ahịa, ngwaahịa na ọmịiko. Ọ na-akwụ ụgwọ n'ezie n'ime paramita ziri ezi.
Ka ụmụ mmadụ wee kwụọ ụgwọ, a ga-eji ya mee ihe n'usoro ahaziri ahazi na ebumnuche. Nke a na-enyere aka ịmata mpaghara ebe mgbanwe dị mkpa ma na-enye anyị ntinye ikpeazụ iji malite usoro ahụ.
Otu n'ime ụzọ kachasị mma isi kpalie ọrụ a bụ site na ajụjụ anọ ndị a:
Olee otú anyị ga-esi ege ntị nke ọma?
Gịnị kpatara ika anyị ji dịrị?
Kedu ihe na-eme ka akara anyị bụrụ mmadụ?
Akara anyi nwere agwa?
Dabere na ntụgharị uche na mkparịta ụka gbadoro ụkwụ na ajụjụ ndị a, ị nwere ike ịbanye n'ime akụkụ dị iche iche na usoro nzaghachi nke mebere atụmatụ mmadụ, ikpo okwu, na nzikọrịta ozi. Jisie ma cheta na ị na-ekpori ndụ n'ụzọ.
Tags: ezigbo ahịabrandmbọnnri Chinadominoesadịghị mmannukwu ndị agadi nke ahịaotúmmadụụdị mmadụmmadụ na-elekwasị anyandi mmadummanya na-emeghị ihe ọjọọakụkọ jumpsakara akara akara linkinlippincottakara ike ika lippincott-linkedinAhịa 3.0ihe nkpuchiụtarị ọrụ ebubemeenri mbụ ogbenye bekeepepsiPepsi Coàgwàphilip kotlerUsoro QRseth godinSimon siri ikeelekọta mmadụ mediakwuo okwuugboro squaretoddytrendsetting
Ụzọ 7 ziri ezi DAM nwere ike ịkwalite arụmọrụ ika gị
Ịre ahịa chọrọ data dị mma ka ọ bụrụ data na-akpata - mgba na ngwọta